Izixhobo zeMveliso | Sichuan Mingtaishun Cemented khabhayithi Co., Ltd.
Yamkela umazibuthe osisigxina we-servo yokuluka, isakhiwo sekholamu esichaseneyo, ujongano lwe-hsk yokuphamba, isebenzisa i-taper kunye nokuqhagamshelana nenqwelomoya, akukho kungcangcazela, inokugcina i-torque rhoqo kuluhlu lonke lwesantya, iqinisekisa ukuzinza kwesantya esiphezulu kunye nokugaya ukuqina, ngaphambili nangasemva kwenkqubo yolawulo, eyiyo , ezikrelekrele, ezingenaxabiso, kwaye kulula ukuzisebenzisa. Ukulungiswa kweqela labasiki bezinto zokugaya, ukusika ibhola, ukusika iimpumlo ngeenxa zonke kunye nezinye izixhobo ezibanzi
I-ANCA-FX5 LINEAR Isixhobo sokusila
I-DEKEP I-axis ezintlanu ze-CNC Isixhobo seGrafti
IZiko lokuPhathwa kweNqwelo
Isithando somlilo sokucinezela esisezantsi siyahambelana nemisebenzi emininzi enje nge-dewaxing, sintering sintering, sintering esezantsi koxinzelelo, ukuqhubekeka koxinzelelo oluphantsi, kunye nokucoca umoya. Isetyenziselwa ikakhulu ukucinezelwa okuphantsi koxinzelelo lweemveliso ezicofiweyo, ukuqhubekeka koxinzelelo olusezantsi lweemveliso ezisetyenzisiweyo kunye nokuhlengahlengiswa kwekhabhoni kweemveliso ezicofiweyo. Owona msebenzi uphambili wokucinezelwa koxinzelelo olusezantsi kukunciphisa ii-pores ezincinci kwi-carbide yesamente. Ama-pores asemzimbeni otyhidiweyo asuswe ngexesha lesithuba sokucoca. Inqanaba lokucinezela ikakhulu kukususa ii-pores microscopic.
Ukufumanisa i-Zoller kunye nemilinganiselo ye-4.0 izisombululo zikunceda ulungiselele ikamva lefektri ekrelekrele. Ukusuka ekufumaneni izinto ezingenayo ukuya ekuqhubekeni nasekufumaneni imveliso egqityiweyo ...
Uthutho oluCoca umlilo oluphantsi
Umshini sintering eziko
Ukufudumeza phantsi kweemeko zokucoca, ukucoca ukungcola kunye nokususa sintering kunceda ukususa ukungcola, ukuphucula ubunyulu bomoya obumanzi, ukuphucula ubumanzi besigaba se-binder, kunye nokukhuthaza impendulo. Ngexesha lonke lenkqubo yokuntywila, umzimba omdaka uxinene phantse ukuba ungabikho porosity, kwaye kuthotho lweziphumo zomzimba kunye neekhemikhali kunye nohlengahlengiso lolwakhiwo oluveliswayo, kwaye ekugqibeleni i-carbide eshinyeneyo enesamente enekhemikhali ethile, iipropathi zomzimba kunye nezomatshini, kwaye
Isixhobo somlinganiso wesixhobo somfanekiso
Xa ulinganisa, isixhobo sokulinganisa isixhobo somfanekiso silungelelanisa kwaye silinganisa isixhobo kumacala amabini. Iyakwazi ukuqonda umlinganiso we-X-axis, Y-axis, Z-axis, axis rotation lens axis, kunye nokujikeleza kwesixhobo ekubambeni enye, ethintela ii-axes ezininzi. Kwimpazamo eveliswe ngexesha lokubotshwa kwesibini, ukulungiswa kokujikeleza okuphezulu kokuchaneka kusetyenziswa iilensi ezimbini, eziququzelela kakhulu umlinganiso. Ububanzi, ubude, ukusika isithuba, i-rake angle, i-angle engasemva, kunye ne-helix angle yesixhobo kunokugqitywa ekubambeni. Imilinganiselo echanekileyo yemilinganiselo eyahlukeneyo enje ngeyona engile iphambili yokwala kunye necala lokuphambuka lesibini